नेपालमै छ यस्तो औषधि पसल : जहाँ जो कोहीलाई ५० प्रतिशत छुट दिईन्छ -जानकारी सेयर गरौँ « Janaboli
नेपालमै छ यस्तो औषधि पसल : जहाँ जो कोहीलाई ५० प्रतिशत छुट दिईन्छ -जानकारी सेयर गरौँ
काठमाडौ । नेपालमा सबैभन्दा धेरै ठगी औषधिमा हुन्छ भन्ने हामी सबैले सुन्दै आएका हौँ । हरेक औषधिमा अधिकतम छुट दिनसक्नेगरी बजारमा आएको हुन्छ भन्ने चर्चा भर्खरै मात्र चल्न थालेको छ । तर न हामी छुट माग्छौ न त औषधि पसलेले छुट दिन्छन् नै । तर आज हामी त्यस्तो औषधि पसलको बारेमा कुरा गर्दै छौ जहाँ जोकोही औषधि किन्दा पसले पुग्दा ५० प्रतिशत सम्म छुट पाईन्छ । न त तपाईले छुट माग्नुनै पर्छ ।
महाराजगञ्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पताल परिसरभित्र रहेको मनमोहन कार्डियो थोरासिक भास्कुलर एन्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरले औषधिमा लेखिएको एमआरपी मूल्यभन्दा ५० प्रतिशत कममा बिक्री गर्दै आएको छ । यसरी औषधि पाउन थालिएको बर्षौ वितेको छ । तर धेरैलाई जानकारी छैन । धेरै औषधि सेवनकर्तालाई यो जानकारी होस् भनेर नै यो सामाग्री तयार पारेको हो । यसलाई अधिकतम सेयर गरिदिनुहोला ।
यहाँ डब्लुएचओ जीएमजी सर्टिफाइड राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले उत्पादन गरेको औषधिमा यो छुट पाइन्छ, त्योपनि वर्षौँदेखि । औषधिमा यति धेरै छुट अन्यत्र कतै पाइँदैन । यहाँ न उपभोक्ताले छुट माग्छन् न त औषधि पसलेले नै घटाउँछन् । नमागीकनै औषधिमा ५० र र केही सर्जिकल सामानमा ७० प्रतिशतसम्म छुट पाइन्छ । यो खबर पढेपछि सेयर गरिदिनुहोला । अरु पसलमा जाँदा समेत औषधिमा लेखिएको मुल्य भन्दा छुट पाईन्छ त भनेर जहाँपनि छुट माग्नुहोला ।
यस्ता समान्य गल्तीले जो कोहीको हुनेछ कि ड्नी फेल ! -मृगौला विशेषज्ञ
काठमाडौ । मृगौला अर्थात कि ड्नी मानिस लगायत सजिव प्राणीको शरिरको महत्वपूर्ण अङ्ग हो ।
अण्डा किन्दा खोलिएको त परेन ! यसरी थाहा पाउन सकिने छ सजिलो तरिका
काठमाडौ । मानिसको शरीरलाई चाहिने पौष्टिक तत्व पाउन हरियो सागपात, पहेँला फलफुल, माछा मासु अण्डालगायत
जाडोमा छाला छाउरी पर्न नदिन अपनाउनुहोस् यस्ता घरेलु उपायहरु…
काठमाडौं । हामीले जुन खाना खान्छौँ त्यसको असर सिधा हाम्रो छालामा पर्न जान्छ । त्यसैले
चिसो मौसममा बच्चामा देखिन्छ यस्तो गम्भीर समस्या
काठमाडौं । बच्चाको राम्रोसँग दिसा नहुनाले वा लामो समय सम्म पेटमा समस्या भएमा बच्चालाई यूरिया